သင့်အတွက်…. ငရဲမှသတိပေးစကား | Shwe Canaan TV
00Unknown Monday, 21 October 2013
￼သို့/ လူလောကတွင်ယခုအသက် ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့ချစ်သော မိတ်ဆွေ…ငရဲထဲမှကျွန်တော် သူေဋ္ဌးကြီးဒိုင်း(စ်)(DIVES)သည် သင့်အားငရဲထဲမှအကြောင်း တွေကို သတိပ...
လူလောကတွင်ယခုအသက် ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့ချစ်သော မိတ်ဆွေ…ငရဲထဲမှကျွန်တော် သူေဋ္ဌးကြီးဒိုင်း(စ်)(DIVES)သည်
သင့်အားငရဲထဲမှအကြောင်း တွေကို သတိပေးပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၂၀၀၀)ခန့်က လူ့လောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ သူေဋ္ဌးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကဟာ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ မှာခရစ်တော် မပေါ်မှီ(၅)နှစ်က စည်းစိမ်ဥစ္စာ အလွန်ကြွယ်၀ချမ်းသာတဲ့ ဂျူး(ယုဒ) မိဘနှစ်ပါးမှဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ညီအကို(၆)ယောက်အနက် ကျွန်တော်ဟာ
ဖေဖေဟာအလွန်ချမ်းသာပြီး ငွေကိုသာတပ်မက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း
မေမေဟာလည်း ကြွယ်၀ချမ်းသာပြီးရုပ်ရည် လှပတ့ဲဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်
မြို့ထဲမှာကျင်းပတဲ့မိတ်ဆုံစားပွဲတွေ၊ မိတ်ဿဟာရပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေကိုဖိတ်ကြားခြင်းခံရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါ
သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ပါ၀င်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုဘူး။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လိုချင်တာအားလုံးကို၀ယ်ပေး
တယ်။ဒါတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေဟာ ကျွန်တော်ကိုအလွန်အားကျကြတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ
ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ဘာသာရေးခံယူချက်ဟာ လေးနက်မူမရှိပါ။သားသမီးတွေကို ဘုရား၊တရားအကြောင်း
ဘာတစ်ခုမှ သွန်သင်လမ်းပြခြင်းလည်းမရှိပါ။ဘုရားတရားရေးမှာ အချင်းချင်းငြင်းခုန်နေတာမျိုးကိုဖေဖေက
ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဘဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာ ဘုရား၊တရားမဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
လူအချို့ကသူ့ကို မေရှိယ လို့ထင်ကြတယ်။တကယ်တော့သူဟာ မေရှိယမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုပျော်ပါးခြင်းနဲ့ကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော့ကိုကျွန်တော်အသက် ငယ််ငယ်နဲ့ သေမယ်လို့မထင်ခဲ့မိပါဘူး။
ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါမျိုးစုံစွဲကပ် လာတဲ့အတွက် ဆေးဆရာ ကိုအမြဲပြနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘဲကျွန်တော်ဟာ
အသက်(၃၆)နှစ်ပြည့်ပြီး(၂)ရက်အကြာမှာ အသက်ထွက် သွားပြီးဒီငရဲထဲကိုရောက်လာပါတယ်။
ခြင်းခံရပါတယ်။မီးတောက်လောင်နေပြီး မီးခိုးနဲ့အမှောင်ထုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဒီငရဲထဲမှာ လူသန်းပေါင်းများ
အဲ့ဒီထဲမှာ ကျွန်တော်လောကတွင်းအသက်ရှင်စဉ်တုန်းက ကျွန်တော့်အိမ်တံခါးရှေ့နားမှာခိုကပ်စား
ထမင်းကျွေးတိုင်း ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ သူကကျွန်တော်ကိုပြောပြတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့စကားကို
ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်မိခဲ့ဘူး။ အခုလာဇရုကိုအာဗြဟံရဲ့ရင်ခွင်မှာမြင်ရတဲ့အခါ ကျွန််တော်နောင်တရမိတယ်။
ဒါနဲ့အာဗြဟံကို အဖအာဗြဟံ….အဖအာဗြဟံ ကျွန်တော့ကယ်မသနားမူပါ။ကျွန်တော်ဟာဒီငရဲမီးထဲမှာ ေ၀ဒနာ
နောင်တမလွန်ရေးအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ဒါကိုသင်အောက်မေ့သတိရပါ။
အခုတော့ လာဇရုကသက်သာခြင်းရှိတယ်။ သင်ကတော့ဒုက္ခေ၀ဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားရတယ်။
နောက်ပြီးငါတို့နဲ့သင်တို့စပ်ကြားမှာ အလွန်နက်တဲ့ချောက်ကြီးရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ဆီက သင်တို့ရှိရာသို့
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာ အာဗြဟံနဲ့အတူ သာယာအေးချမ်းတဲ့နေရာမှာငြိမ်းချမ်းစွာရှိနေကြတာကို
စပါးကိုစပါးဂိုဒေါင်ထဲသွန်ချသလို ကမ်ဘာပေါ်မှလူသားတွေဟာငရဲမီးအိုင်ထဲကို အဆက်မပြတ်ရောက်
လာနေကြတယ်။ ငရဲမီးထဲရောက်တာနဲ့ကြောက်လန့်ကာ အော်ဟစ်ငိုကြွေးကြတော့တာဘဲ။ ကမ်ဘာကနေရောက်
လာတဲ့လူသစ်တွေက ကျွန်တော်တို့ကိုလောကမှာရှိတဲ့ လူသားတွေရဲ့ခေတ်မီတီထွင်မူနဲ့ ကမ်ဘာကြီးတိုးတက်
လူသားတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုးတက်ကြပေမယ့် ဘုရား၊တရားရေးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ
စိတ်၀င်စားမူမရှိကြဘူး။နိုင်ငံပေါင်းစုံကဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူရွယ် သန်းပေါင်းများစွာဟာလည်း ငရဲထဲ
နေနေသာသာ တမှေးမှတောင်အိပ်လို့မရဘူး။ထမင်းဆိုလို့ေ၀လာေ၀းပဲ။ဓါတ်ဆီပီပါပုံးကြီးထဲ ဆီးဖြူသီးမ
ကျွန်တော်ပါးစပ်ဟတိုင်း မီးတောက်မီးလျှံတွေဟာ ပါးစပ်ထဲ၀င်လာတယ်။ကျွန်တော်ဟာဗိုက်ထဲမျို
လူလိုဘဲ ကျွန်တော်ဟာငရဲမီးထဲမှာနစ်မွန်းနေတယ်။ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေဟာ မီးခိုးမီးလျှံတွေကြောင့်ပူလောင်
ဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းမှာ လူ့လောကကမ်ဘာပေါ်တတ်လာပြီး သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်
ကောင်းကင်တမန် တပါးကိုလည်း ကျွန်တော်တွေ့တယ်။
မေးတဲ့အခါ ကောင်းကင်တမန်ကသူဟာ တချိန်တုန်းက ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း လိုက်နာခဲ့တဲ့သန့်
ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ စာတန်မာရ်နတ်ရဲ့သွေးဆောင်မူနောက်ကိုလိုက်ပြီး ဘုရားသခင်
စာတန်မာရ်နတ်ဟာ ဘုရားသခင်ကလွဲရင် တန်ခိုးအကြီးဆုံးနဲ့အလှပဆုံးဖြစ်တယ်။
ကောင်းကင်တမန်များစွာဟာ မာရ်နတ်ရဲ့စကားကိိုနားထောင်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုပုန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငရဲမီးထဲမှာ အခုလိုဒုက္ခခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ငရဲဟာမာရ်နတ်နဲ့ သူ့နောက်လိုက်အပေါင်းအသင်းတွေအတွက် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း
တွေဟာ အလွန်စိတ်ပျက်၀မ်းနည်းနေကြပါတယ်။ယခုခေတ်ကမ်ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့လူသားတွေ
ဟာ မာရ်နတ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင် သူတို့လိုဘဲဒီငရဲထဲကို ရောက်လာကြမှာဘဲလို့ အချုပ်ခံနေရတဲ့
တကယ်ဆိုရင် ယခုအသက်ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့လူသားတွေဟာ သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်လက်ခံရင်
ဒါကြောင့်လောကမှာယခုအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ ချစ်သောမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ မာရ်နတ်ရဲ့စကားကိုမယုံ
စွာခံစားနေရပါတယ်။ တနေ့မှာကျွန်တော်ဖေဖေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးမိတယ်။ အဲဒီအခါကျွန်တော်က ဖေဖေလောကမှာ
နေစဉ်က ဘုရားသခင်စကားကိုဖေဖေဘာကြောင့် မယုံကြည်ခဲ့သလဲ။ငရဲသိုမရောက်ရအောင်သားတို့ကိုဘာဖြစ်
လို့မပြောပြ၊မသွန်သင်ခဲ့သလဲ လို့မကျေမနပ်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကဖေဖေက သားရေဖေဖေမှားပါပြီ
ဖေဖေမှားပါပြီ လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောကြားခဲ့တယ်။ယခုလိုငရဲရောက်မှမှားမှန်းသိတော့အပိုပါဘဲ။ ယခုအချိန်ကျမှ
ဒါကြောင့် ချစ်သောမိတ်ဆွေ……..သင့်အသက်တာကို သင်သတိပြုလျက်ပြင်ဆင်အသက်ရှင်ပါ။
ကျွန်တော်က ဖေဖေကိုမုန်းတယ်၊မေမေကိုမုန်းတယ် လို့ပြောမိပါတယ်။ ငရဲသို့မရောက်ရအောင်
ဒါကြောင့် ချစ်သောမိဘများခင်ဗျား……မိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုငရဲသို့မရောက်ရအောင် ဘုရားသခင်
ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သမ္ပာကျမ်းစာအတိုင်း လမ်းပြသွန်သင်ကြပါလို့ ကျွန်တော်တောင်းပန်လိုပါတယ်။အပြစ်
ဒဏ်ခံရာ ဤအပယ်ငရဲသို့မရောက်ရအောင် လမ်းပြသွန်သင်ခြင်းမပြုတဲ့မိဘတွေနဲ့ လမ်းလွဲအောင်ဟောပြော
ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကျွန်တော်ဆက်ခံရမလဲလို့ညီးပြုအော်ဟစ်မိတယ်။အဲဒီအခါ ထာ၀ရ…ထာ၀ရအစဉ်
အမြဲ ဘဲလို့အေ၀းတနေရာက နတ်ဆိုးတပါးရဲ့ဖြေကြားသံကို ကျွန်တော်ကြားရတယ်။
ရေတခွက်လောက်သောက်ပါရစေ လို့လူတယောက်ကအော်ဟစ်တောင်းခံတဲ့အခါ ဘယ်တော့မှမ
သောက်ရဘူး ဘယ်တော့မှမသောက်ရဘူး လို့နတ်ဆိုးတပါးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်
ခြင်းကျေးဇူးကို လက်မခံသူတွေဟာ ကမ်ဘာအဆက်ဆက်နေ့ညမပြတ်သက်သာရာမရကြလို့ သမ္မာကျမ်းစာရဲ့
များစွာလည်း ရှိနေပါတယ်။ခံစားရတဲ့ဒုက္ခေ၀ဒနာတွေကို အရက်သောက်ပြီးမေ့ပျောက်လိုတဲ့အရက်သမားတွေ
လူ့လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်တုန်းက ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ဘဲ က့ဲရဲ့ကျောခိုင်းသူတွေဟာ ငရဲထဲ
ရောက်တော့မှမိ်မိတို့မှားမှန်းသိကြတယ်။ ဒီငရဲထဲမှာ ပညာတတ်ပုဂ္ဂုလ်တွေ၊ ပညာမဲ့တွေ၊သူေဋ္ဌးတွေ၊ဆင်းရဲ
ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိရင် ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ်ငရဲထဲရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်
တော် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့သတိပေးစကားကို သူတို့အခုမှလက်ခံသဘောပေါက်သွားကြတယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်သောမိတ်ဆွေ…….သင်လည်းနောင်တမလွန်မှာငရဲနဲ့လွတ်ဖို့ သင့်ဘ၀ကိုယခုကတည်း စစ်ဆေး
တွေကိုယုံကြည်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ အလွန်နောက်ကျသွားပါပြီ။ ငရဲထဲမှာနောင်တရပြီး မိမိအသက်တာကိုပြန်
ငရဲထဲရောက်မှသူတို့ သဘောပေါက်နားလည်လာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ …..နောက်ကျသွားပါပြီ။အဲဒီလူတွေဟာ
ငရဲကလွတ်အောင် ဘာသာရေးပုဂ္ဂိလ်၊ ဂိုဏ်ကဏနဲ့အသင်းတော််အဖွဲ့အစည်းတွေကမကယ်တင်မစွမ်း
ဆောင်ပေးနိုင်ပါ။မိဘနှစ်ပါးကသခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့
(အမည်ခံခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင်) အဲဒီသားသမီးတွေဟာ ငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသွေးတော်ကသာ အပြစ်ဖြေလွတ်ပေးသောကြောင့် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေသာငရဲနှင့်
လွတ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်မယ် လို့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်ကအတိအကျပြောထားပါတယ်။
နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်ပြီး ခံစားရဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီငရဲထဲမှာ မီးလောင်ခံရခြင်း၊ဆာလောင်
မွတ်သိပ်ခြင်း၊ရေငတ်ခြင်းတွေအပြင် သန်းပေါင်းများစွာသောပိုးလောက်ကောင်တွေက ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်တ
ခုလုံးကို ကိုက်စားထိုးဖောက်ကြပါသေးတယ်၊နည်းနည်းလေးမှသက်သာမူမရပါ။ ဒီငရဲဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့
နောက်ဆုံးတရားစီရင်ရာနေ့အထိ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့ လူတွေအားလုံးကိုချုပ်နှောင်တဲ့အ
ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်ကင်းစင်ပေမဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေရဲ့အပြစ်တွေအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်
သူက ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သနားလို့ ကျွန်တော်တို့ခံရမဲ့အပြစ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားအ
သေခံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက သူ့စကားကိုနားမထောင်ကြဘူး။ သူ့ကို ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။
တစ်နေ့ပလ္လင်ဖြူကြီးရှေ့ရောက်ရင် သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့လူသားအားလုံးဟာ သူကိုဒူးထောက်ရှစ်ခိုး
ကြရလိမ့်မယ်။ သခင်ယေရူခရစ်တော်ဟာဘုရားဖြစ်ကြောင်း ထိုသူအားလုံးတို့နှုတ်က၀န်ခံရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အကျိုးထူးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး နောက်ကျသွားပါပြီ။
ငရဲမီးအိုင်ဟာ ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားပုန်ကန်တဲ့ မာရ်နတ်နဲ့သူ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးတွေ၊၀ိညာဉ်ဆိုးတွေ
ငရဲထဲရောက်၇င် ဒုက္ခေ၀ဒနာမျိုးစုံကိုသေချင်လောက်အောင်နာကျင်စွာအဆက်မပြတ် အစဉ်အမြဲခံစား
ကြရပါလိမ့်မယ်။သေချင်ပေမဲ့ မသေနိုင်ပါဘူး။ ငရဲမီးအိုင်ဟာသခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်လက်ခံ
ခြင်းမရှိသောလူတွေ ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ…….
သင်လည်းငရဲထဲရောက်ရင် ဒီအတိုင်းဘဲခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့ ယခုအချိန်
ကျွန်တော့်ကို အပြစ်ဒုစရိုက်ထဲနစ်မျောစေပြီး ဘုရားတရားသိအောင်လမ်းညွန်မပေးခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို
အပြစ်တင်မိတယ်။ဒေါသထွက်မိတယ်။ အကယ်၍မိဘတွေကသာ ကျွန်တော့်ကိုဘုရားတရားသိအောင်
သွန်သင်ညွန်ပြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်အားကိုးမှာပေါ့၊ကျွန်တော်တို့ညီအကို
အားလုံး လည်း ဒီငရဲရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့အခုတော့မိဘတွေက ဘုရားတရားကိုလျစ်လျူ
ရူထားပြီး သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာဘဲ အချိန်ကုန်နေကြတယ်။
ချစ်မိတ်ဆွေ…..သင်လည်းသင့်ရဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအထဲမှာဘဲ အချိန်ကုန်မနေပါနဲ့။ သင့်ရဲ့နောင်တမလွန်
အကြောင်း မပြောပြတတ်တော့ သားသမီးတွေရှိရင် ကျွန်တော်ဟာသူတို့ကိုငရဲထဲရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့နံပါတ်
တစ် တရားခံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ယခုငရဲထဲကိုရောက်နေရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်
တိုင်ပါဘဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သခင်ယေရူကိုယုံကြည်လက်ခံကိုးစားခြင်းမရှိခဲ့လို့ပါ။
ပါနဲ့။ကိုယ့်အပြစ်ကိုနောင်တရပြီး အပြစ်လွတ်ပိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါ။
တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချစ်သောမိတ်ဆွေတို့ အချိန်မှီနောင်တရကြပါ။
ညှင်းဆဲခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ငရဲမီးဟာဒီလောက်ပြင်းထန်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ခဲ့မိဘူး
ကျွန်တော်ဒီငရဲထဲရောက်ပြီးမှ နောင်တမလွန်ဘ၀ရှိကြောင်း၊ငရဲရှိကြောင်း၊ ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရူ
ခရစ်တော်ဘုရားရှိကြောင်း သိမြင်လာပြီးမိမိကိုယ်ကို ခွင့်မလွတ်နိုင်အောင် ယူကျုံးမရဖြစ်ရတယ်။နောင်တမ
လွန်ဘ၀အတွက် ကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အမှားမျိုးချစ်မိတ်ဆွေတို့မဖြစ်ဖို့ အချိန်မှီနောင်တရကြပါ။
မာရ်နတ်ဟာ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူ သူခိုး လူသတ်သမားဖြစ်တယ်။သူပြောသောစကားကိုမယုံကြပါနဲ့။
ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ မာရ်နတ်ကိုကျောခိုင်းပြီး ဘုရားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်ကြပါ။ ကယ်တင်
ခြင်းမရခင်သေဆုံးသွားရင် သင်ဟာငရဲထဲမှာ ပြစ်ဒဏ်ထာ၀ရခံရမယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်ပြီးအချိန်မှီနောင်တရပါ။
မိဘများခင်ဗျား…..သားသမီးတွေကို ဘုရားတရားအကြောင်းမသွန်သင်တဲ့ ကျွန်တော့်မိဘလိုမျိုးမဖြစ်ပါ
စေနဲ့။ သားသမီးတွေကို ကယ်တင်သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံအားကိုးလာအောင်သွန်သင်လမ်း
ပြဖို့မိဘတိုင်းမှာတာ၀န်ရှိပါတယ်။သားသမီးတွေကို ဘုရားတရားသိအောင် ကယ်တင်ခြင်းခံစားရအောင်
ကျွန်တော်ပြောတာကို ယုံကြည်စွာဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါ။ မယုံကြည်ရင်တော့ သင့်ဟာသေသေပြီးခြင်း တစ်မိနှစ်အတွင်း
ကျွန်တော်ပြောသမျှကို သင်လက်တွေ့သိမြင်ယုံကြည်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကြမှနောင်
ဒါကြောင့် ချစ်သောမိတ်ဆွေ…….သင်ယခုအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့နောင်တမလွန်အရေးကိုစဉ်းစားပါ။
သင့်အသက်တာကို အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာလျှောက်လှမ်းအသက်ရှင်ပါ။သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို သင့်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်
စိတ်နှလုံးထဲမှာ ယုံကြည်လက်ခံပြီး ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်း အသက်တာကိုလျှောက်လှမ်းပါ…ချစ်မိတ်ဆွေ။
ဒုက္ခတွေဟာအင်မတန်ပြင်းထန်ပြီး ကြောက်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ငရဲထဲရောက်ပြီးရင်လည်း ပြန်လာလို့
မရဘဲ အဲဒီမှာထာ၀စဉ် အမြဲနေရမယ်လို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်က
ချစ်သောမိတ်ဆွေ…..သင်ယခု အသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ဤလောကကြီးထဲမှာရှိသမျှ သက်ရှိသက်မဲ့
အခိုးအငွေ့လိုပါပဲ။ယခုအသက်ရှင်လျက်ရှိနေပေမယ့် မနက်ဖြန်ကျရင် အသက်ရှင်လျက်ရှိချင်မှရှိနိုင်မယ်။ဒီအ
ထဲမှာ မိတ်ဆွေလည်းပါတယ်ဆိုတာသတိပြုမိရဲ့လား။အိုခြင်း နာခြင်းနဲ့သေခြင်းတွေကို မိတ်ဆွေမလွန်ဆန်နိုင်
ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေ သင့်ဘ၀ကို သင်သတိပြုပါ။ လူသားတိုင်းဘယ်အချိန်သေရမယ်ဆိုတာ အတိအကျမ
သိနိုင်ပေမယ့်သေချာတဲ့အချက်ကတော့ မည်သူမဆို တစ်နေ့တော့သေရမယ်ဆိုတာပါပဲ။အဲဒီလိုသေသွားပြီးတဲ့
နောက်ပိုင်းမှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုရော သင်သိရဲ့လား။
ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာတော့သေသွားပြီးတဲ့လူတိုင်းငရဲ၊ ဒါမှမဟုတ်
ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုခုကိုသွားရမယ်လို့ အတိအကျပြောထားပါတယ်။ ချစ််မိတ်ဆွေ…
အချို့က…မိမိရဲ့နောင်တမလွန်ရေးအတွက် စဉ်းစားဖို့နေနေသာသာ ဘုရားဆိုတာ မရှိဘူးလို့ပြောကြပါ
တယ်။မိမိသွေးသားတပ်မက်မူဖြင့် ဘုရားမဲ့စရိုက်နဲ့ မိမိထင်ရာ၊မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလိုအသက်ရှင်ကြပါတယ်။
မိတ်ဆွေ…တကယ်တော့ဘုရားဆိုတာရှိပါတယ်။ ဘုရားရှိကြောင်းကို သိပ္ပံနည်းနဲ့တော့ သက်သေမပြနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ချစ်မိတ်ဆွေ..သင်နေ့တိုင်းထမင်းချက်စားနေတဲ့ အိုးကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီအိုးကိုပြုလုပ်တဲ့သူမရှိရင်
သင်ဟာအဲဒီအိုးနဲ့ ထမင်းချက်စားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအိုးကိုပြုလုပ်တဲ့သူရှိလို့သင်ဟာအဲဒီအိုး၀ယ်ပြီး
ထမင်းချက်စားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်…ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ ပြုလုပ်တဲ့သူမရှိရင် သူ့အလိုလိုတော့ဖြစ်မလာပါဘူး။
ပြုလုပ်တဲ့သူရှိလို့ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ….ေ၇၊မြေ၊တော တောင် ပင်လယ်၊
သမုဒ္ဒရာ၊သစ်ပင်၊ပန်းပင်၊လူတွေ၊ တိရစာၦန်တွေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့အရားအားလုံးကို
ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီအရာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့သူ ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဆိုတာရှိကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်တဲ့ အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာတော့ အတိ
အကျ ဖေါပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးဘုရားဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တစ်ဆူတည်းပဲရှိရမယ်။တန်ခိုးနဲ့ပြည်၀ရမယ်။
စုံလင်ရမယ်။ဖန်ဆင်းနိုင်ရမယ်။သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်ရမယ်။ လူသားတွေနဲ့ နောင်တမလွန်ရေးကို အမခံချက်ပေး
တာရှိကြောင်း မိတ်ဆွေသိပြီးဆိုရင် ဆက်လက်ဖတ်ပါမိတ်ဆွေ။
ဤလောကကြီးထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာ ယခုဘ၀၊နောင်ဘ၀စိတ်ချမ်းသာ
ခြင်း၊သေရည်သေရက် သောက်သုံးခြင်း၊မိမိတပ်မက်မူအတိုင်းကျင့်ကြံပြုမူခြင်းတွေနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမူကိုရှာဖွေကြ
တယ်။ အဲ….နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီအရာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ချမ်းသာမူကို ခေတ္တခဏသာပေးနိုင်ပြီး
အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သူတို့ကို ရောဂါဆိုးအမျိုးမျိုးဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အူမတောင့်မှသီလစောင့်မယ်၊ ဆိုပြီး ယခုဘ၀ကိုဦးစားပေးကြတယ်။ နောက်ဘ၀အရေးကို အလေးမထား မစဉ်းစားကြဘူး။
တွက်၊ဒါငါ့မြေးအတွက်…..ဒါကတော့ငါ့ဘ၀ ရှေ့ရေးအတွက်ဆိုပြီးဒီလိုနဲ့ပဲအတောမသတ်နိုင်ဘူး။ လောဘမသတ်နိုင်ကြ ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ရလေလိုလေ၊အိုတစေၦ ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်၀ချမ်းသာလေလေ၊ထပ်ပြီးလိုချင်လေလေပဲ
မဟုတ်ဘူးလား။တကယ်တော့အတတ်ပညာတွေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာ စစ်မှန်တဲ့ စိတ်ငြိမ်သက်ချမ်းသာမူကိုမ
ပေးနိုင်ပါဘူး….မိတ်ဆွေ။ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့၊ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှအားလုံးဟာ
လည်းမိမိရဲ့နောင်တမလွန်ရေးအတွက် အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးအဲဒီပိုင်ဆိုင်ထားသမျှအရာတွေ
အားလုံးကိုလည်း နောင်တမလွန်ဆီကို ယူသွားလို့မရပါဘူးမိတ်ဆွေ။သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်က
သင်တို့သည် ဤလောကသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲ လာသည်ဖြစ်၍ ထွက်သွားလျှင်လည်း အဘယ်အရာကိုမျှ
တချို့ကတော့ လောကအသက်တာမှာကောင်းကောင်းစား၊ကောင်းကောင်း၀တ်ပြီး ကြွယ်၀ချမ်းသာစွာ
စည်းစိမ်ခံစားနိုင်ဖို့ ငွေကြေးတွေ၊စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို ကြိုးစားရှာဖွေကြတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားရှာဖွေရင်း သူတို့ရဲ့
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပဲ အချိန်တွေကုန်နေတယ်။သူတို့့ရဲ့ဘ၀ဟာ အလုပ်ထဲမှာပဲ နစ်မွန်းနေတယ်။
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့စား၀တ်နေရေးအတွက်ပဲ ရှာဖွေလုံးပန်းရင်း အသက်၀ိညာဉ်ရေး (နောင်တမလွန်ရေး)ကို
မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထက် အခြားဘယ်အရာကို
မျှ ဦးစားမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
သင်လည်းပါနေမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေကိုမေတ္တာနဲ့သတိပေးပါရစေ။တိုတောင်းလွန်းတဲ့ ဤလောကအသက်တာ
မှာ မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းအသက်ရှင် နေထိုင်စားသောက်သွားလာရတယ်ပဲထားဦး၊ သေသွားပြီးတဲ့
နောက် နောင်တမလွန်ဘ၀မှာကြတော့မိတ်ဆွေဟာငရဲထဲရောက်မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ဘ၀ဟာ အင်မတန်
ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေထိုင်စားသောက်ရရင် ပြီးတာပဲကွာ။ငရဲတွေ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွေ နောင်တမလွန်ရေး
တွေ အကြောင်းကိုစိတ်အရူပ်ခံ အချိန်အကုန်ခံစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူး….လို့ပြောကြပါတယ်။ နောင်တမလွန်ရေးကို
ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘော ထားကြပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ဆဆအသက်ရှင်ကြတယ်။၀မ်းနည်းစရာကောင်းလေစွ။ယခု
ဘ၀မှာရွှေတွေ ငွေတွေစည်းစိ်မ်ဥစ္စာတွေကိုဘယ်လောက်ပဲပိုင်ဆိုင် ချမ်းသာနေပါလေ့စေ။တိုက်တွေ၊ ကားတွေ၊
သငေ်္ဘာတွေ ၊လယ်ယာတွေ၊ ခြံတေ၊ွ ငါးမွေးကန်တေ၊ွ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးစုံနဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊
ရာထူးတွေ၊ ဘွဲ့တွေ၊ ဘယ်လောက်ပဲပိုင်ဆိုင်နေပါလေ့စေ။ နောင်တမလွန်ဘ၀မှာ ငရဲနဲ့မလွတ်
ဘူးဆိုရင်တော့၊ယခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အရာအားလုံးနဲ့ပျော်ရွှင်မူတွေဟာအလကားပါပဲမိတ်ဆွေ။ ဒါကြောင့် ယခု
ဘ၀မှာငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ နေထိုင်စားသောက်ရပြီး နောင်တမလွန်မှာလည်း ငရဲနှင့်သေချာပေါက်
တချို့က…..ငါတို့ကတော့ကွာ စား၀တ်နေရေးအတွက် ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ပြီး ရှာဖွေစားသောက်
နေရတာ၊ စား၀တ်နေရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ ၊ငရဲတို့ နောင်တမလွန်အရေး
ယခုအချိန်မှာ ဒါတွေစဉ်းစားဖို့မလိုသေးပါဘူး။ အချန်တွေအ
ဘုရား၊တရားလိုက်စားကြတာပေါ့။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့၊ ငရဲတို့၊ နောင်တမလွန်ရေးတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြ
တာပေါ့။ ယခုတော့စား၀တ်နေရေးအတွက်အလုပ်ကိုပဲ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုက်ဦးမယ်…..လို့ဆိုတတ်ကြပြန်ပါ
တယ်။အလုပ်မလုပ်ဘဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့၊ ငရဲတို့၊ နောင်တမလွန်ရေးတို့အကြောင်းစဉ်းစားစေလိုခြင်းမျိုးမ
အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း တစ်ဖက်ကလည်းနောင်တမလွန်မှာ ငရဲနှင့်လွတ်ဖို့အ
တွက် နောင်ရေးစိတ်အေးရအောင် သတိပေးနေရခြင်းပါ။ယခုဘ၀မှာလည်းဆင်းဆင်းရဲရဲချို့ချို့တဲ့တဲ့နဲ့ နေထိုင်
စားသောက်ရပြီး တမလွန်ဘ၀ကြပြန်တော့ လဲငရဲကျမယ်ဆိုရင်မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့နောင်တမလွန်
ဘ၀ကို ငရဲနဲ့သေချာပေါက်လွတ်အောင်ယခု ကတည်းကပြုလုပ်ဖို့မေတ္တာနဲ့သတိပေးနေရတာပါမိတ်ဆွေ။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ….သင်ဟာ နေထိုင်စားသောက်၊၀တ်ဆင်ဖို့အတွက် ရှာဖွေလုံးပမ်းရင်း သင့်ရဲ့အချိန်
တွေကုန်နေပါသလား။သင်ဟာဤလောကမှာ ထာ၀စဉ်နေရမယ်လို့ ထင်နေပါလား။
တစ်နေ့ကျဤလောကမှသင်ဧကန်အမှန်ထွက်ခွာသွားရမယ်ဆိုတာကို သင်သတိပြုပါ။ အဲဒီလိုထွက်ခွာသွားတဲ့အခါသင်
သွားရမယ့်နေရာကို ယခုကတည်းက အတိအကျသိထားဖို့လိုပါတယ်။ နေထိုင် စားသောက် ၀တ်ဆင်ဖို့နဲ့ သင့်ရဲ့ဘ၀လိုအပ်မူ
များအတွက် ကြိုးစားရှာဖွေရင်း တစ်ဖက်က လည်းသင့်ရဲ့နောင်တမလွန်ရေးစိတ်အေးရေးရအောင်ပြုလုပ်ပါ……..
မိတ်ဆွေ။နောက်ပြီးမိတ်ဆွေဟာ ဤလောကမှ ထွက်ခွာသွားရမယ့်အချိန်ကို မသိတဲ့အတွက် အချိန်ကိုမဆွဲဘဲ
ယခုအချိန်ရှိတုန်း မိတ်ဆွေရဲ့နောင်တမလွန်ရေးအတွက် အလေးအနက်ထားစဉ်းစားပြီး လုပ်သင့်တာကိုလုပ်ပါမိတ်ဆွေ။
တချို့ကတော့ ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာ ရောက်မယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတဲ့နေ
ရာရောက်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ချစ်သောမိတ်ဆွေ သင့်ရဲ့ဘ၀အသက်တာမှာလည်းကောင်းတာ
လုပ်တာနဲ့ မကောင်းတာလုပ်တာ ဘယ်ဟာကိုကပိုများနေသလဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြည်ပါ။ကိုယ်ထိလက်ရောက်
ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့ နှုတ်နဲဲ့ကျူးလွန်ခြင်းတွေကိုမိတ်ဆွေ ထိန်းနိုင်
တယ်ပဲထားဦး သူတစ်ပါးကိုစိတ်နဲ့ကတော့မလွဲမသွေ ပြစ်မှားကျူးလွန်မိမှာသေချာတယ်။ အဲဒီလိုပြစ်မှားကျူး
လွန်မိတာနဲ့တပြိုင်တည်း မိတ်ဆွေမှာအပြစ်ရှိနေပြီး၊မကောင်းတာလုပ်နေပြီဆိုတာသတိပြုပါ။ အဲဒါကြောင့်
နှုတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်းစတဲ့ မကောင်းမူအကုသိုလ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ်၊ကောင်းမူကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရင်
အတိုင်းမိတ်ဆွေလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမူကုသိုလ်က နည်းနည်းလေးဖြစ်နေပြီး မကောင်းမူအကုသိုလ်တွေက
အဆမတန်များလွန်းနေတာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေလုပ်လိုက်တ့ဲ
ကောင်းမူကုသိုလ်ဟာ မိတ်ဆွေရဲ့နောင်တမလွန်ရေးအတွက် အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။
အချို့ကတော့…အကျင့်သီလ၊ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို ကြိုးစားလိုက်လျှေက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်
နောက်ဆုံးတော့လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲကျူးလွန်ကြတယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်
ကျူးလွန်ခြင်း၊နှုတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်း၊စိတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်းတွေကို ကျူးလွန်ကာအကျင့်သီလ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ဖောက်ပြန်ပျက်ပြားကြကုန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအတိုင်းတသေ၀မတိမ်း လိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဘယ်လူသားမှလည်းအတိအကျမလိုက်လျှောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အကျင့်သီလ၊ကိုယ်ကျင့်တရားဟာလည်း
အချို့ကတော့..နောင်တမလွန်မှာ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ဘာသာတရားကို အလေးထားလိုက်စား
ကြပါတယ်။ ဘာသာတရားမှာပါတဲ့သွန်သင်မူပညတ်တရားတေါကို လိုက်လျှောက်ကြတယ်။
သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်…..ဘာသာတရားပါတဲ့ ပညတ်တစ်ပါးကိုချိုးဖောက်မိရင်ပညတ်တရားအားလုံး
ကိုချိုးဖောက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အတွက် ပညတ်တရားအားလုံးကလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ ဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်းမလိုက်လျှောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဟာလည်း နောင်တမလွန်ရေးအတွက်
အချို့ကတော့…..ပြောကြတယ်။ငယ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့ပထမ အရွယ်မှာပညာရှာ ။ အရွယ်ရောက်ကြီး
ပြင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာ။ အသက်ကြီးရင့်အိုမင်းလာပြီတဲ့ တတိယအရွယ်မှာတရားရှာတဲ့ ၊
ဘုရားတရားလိုက်စားတဲ့။ ဒါလဲ…သိပ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါဘဲမိတ်ဆွေ။ အဲဒါပေမယ့် အထူးသတိပြုစရာ
အချက်တစ်ချက်ကတော့ အစီအစဉ်အတိုင်းမဖြစ်ဘဲ၊ ပထမအရွယ်ဖြစ်တဲ့ပညာရှာတဲ့အရွယ်မှာသေသွားခဲ့ရင်
ပညာရှာတဲ့အရွယ်မှာနဲ့ ဥစ္စာရှာတဲ့အရွယ်မှာသေသွားတဲ့လူတွေအတွက်သွားရာလမ်းဟာလည်း တရားမရှာရသေးတဲ့
အတွက် ဘုရားတရားမလိုက်စားရသေးတဲ့အတွက် ငရဲပဲသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သေသေချာချာစဉ်းစားပါ
မိတ်ဆွေ။ သင့်ရဲ့ဘ၀ကို သင်သတိပြုပါ။
မှာ အတိအကျမသိဘဲနောင်တမလွန်ကျမှသိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အသက်ရှင်မူမျိုးဟာလည်း အလွန်အန္တရာယ်
များပါတယ်။ နောင်တမလွန်ဘ၀ရောက်သွားမှ ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားရမယ်ဆိုရင်တော့တော်ပါရဲ့၊အကယ်၍
ငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ပါဘူး ထိုအချိန်ရောက်မှငရဲသို့မသွားရအောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလုပ်လို့ရတော့
ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ မိမိတိ့ုရဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆများ၊မိမိတို့ရဲ့ဘာသာရေးကျင့်ထုံးများ၊ကောင်းမူ
ကုသိုလ်၊အလှူဒါနများ၊အကျင့်သီလ၊ကိုယ်ကျင့်တရားများအားဖြင့် ကြိုးစားလျက်ရှိနေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး
ငရဲဆိုတဲ့နေရာကိုတော့ ဘယ်သူမှသွားချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေလည်း သွားချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ငါသေရင်ဘယ်ရောက်မလဲ၊ငရဲလား ၊ဒါမှမဟုတ် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊သေခြင်းကင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလား
ဆိုတာကို သေသေချာချာစဉ်းစားစစ်ဆေးပါမိတ်ဆွေ။ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့နောင်တမလွန်ဘ၀မှာ
လူဟာသူတစ်ပါးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်အပြစ်မကျူးလွန်မိအောင် နှုတ်နဲ့မပြစ်မှားမိအောင်
စောင့်ထိန်းလို့ရကောင်းရပေမဲ့ စိတ်နဲ့မပြစ်မှားမိအောင်တော့ ဘယ်သူမှရှောင်ကွင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အပြစ်နဲ့မကင်းနိုင်တဲ့အပြစ်သားတွေချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်သားဆိုရင် ကောင်းကင် နိုင်ငံကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။
လူတွေဟာ မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကစပြီး ယနေ့အထိလူသိအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊လူမသိအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
သေခြင်းပေတည်း…လို့ အတိအကျပြောထားပါတယ်။ သေခြင်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်သေခြင်းတင်မက ၀ိညာဉ်ပါပျက်စီးဆုံးရူံးမှာကို ဆိုလိုပါတယ်။
လူသားတွေဟာ အပြစ်မကျူးလွန်မိအောင် လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟမရှိအောင် ကြိုးစားချုပ်တည်းကြပေ
ဒါကြောင့် လူသားတိုင်းဟာအပြစ်နဲ့မကင်းသူတွေချည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငရဲနှင့်လွတ်ဖို့မိမိကိုယ်မိမိ မကယ်တင်နိုင်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသားတိုင်း ငရဲနှင့်လွတ်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကယ်တင်ရှင်တစ်ဦးလိုနေပြီဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။
လူသားတိုင်းအတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း တစ်ခုကတော့ လူသားအားလုံးနောင်တမလွန်
ဘုရားသခင်ဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းငရဲနှင့် လွတ်ရန်အတွက်သီးသန့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ်ဘာပေါ်ရှိလူမျိုးပေါင်းစုံမှာပါ၀င်တဲ့လူသားအားလုံး ငရဲနှင့်လွတ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူသားအား
ဘုရားသခင်ဟာလူသားတွေကိုငရဲမှ ကယ်တင်ဖို့သူ့ရဲ့တစ်ပါးတည်းသောသားတော်သခင်ယေရူ ခရစ်
တော်ကို လူသားအဖြစ် ဤလောကသို့စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်.။အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ လူတွေကို ကယ်တင်ဖို့
ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်၏သားတော်သခင်ယေရူ ခရစ်တော်ကို
ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ငရဲသို့မရောက်၊ ထာ၀ရ
အသက်ကိုရစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည်မိမိမှာရှိတဲ့ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်
အောင် လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။လောကီသားတို့အား အပြစ်စီရင်ခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် သားတော်
ကိုဤလောကသို့စေလွတ်သည်မဟုတ်။လောကီသားတို့သည် သားတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရမည့်
အကြောင်း၊ငရဲနှင့်လွတ်ရမည့်အကြောင်းစေလွတ်တော်မူ၏။ သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင် ခြင်းကိုမခံရ။ ငရဲသို့မရောက်ရ….လို့ ဘုရားသခင်ကတိပေးထားပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ လူသားအားလုံးကို သိပ်ချစ်လို့သူ့ရဲ့တစ်ပါးတည်းသောသားတော် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို
လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေသတ်
ခြင်းခံစေခဲ့ပါတယ်။ သခင်ယေရူခရစ်တော်ဟာ လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်အတွက်အသေခံတယ်။ ဒါပေမယ့်
(၃)ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် ပြန်ရှင်လာသလဲဆိုရင် သခင်ယေရူခရစ်တော် ဟာ သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်လို့ပါပဲ။
နောက်ပြီးသခင်ယေရူခရစ်တော်ဟာ မနေ့ ယနေ့ နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘဲ ထာ၀ရ အသက်ရှင်
တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ….မိတ်ဆွေဟာသခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင် ရှင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေမှာရှိတဲ့ အပြစ်အားလုံး ဖြေလွတ်ခြင်းခံရမယ်လို့သမ္မာကျမ်းစာထဲ
မှာ အတိအကျဖေါ်ပြထားပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာ အဲဒီလိုအပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးမှ ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားနိုင်မှာ
မိတ်ဆွေဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိနေပါစေ၊ဘုရားသခင်ဟာ မိတ်ဆွေကိုချစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေငရဲထဲ
ကျမှာကိုလည်း ဘုရားသခင်ပူပန်နေပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ ယခုဘ၀အတွက်သာမကနောင်တမလွန်ရေးအတွက်
ပါ စိတ်အေးရအောင် ဘုရားသခင်ကအာမခံချက်ပေးလိုပါတယ် ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့ နောင်တမလွန်မှာ ငရဲမှ လွတ်ဖို့မိတ်ဆွေရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်။ သင့်ရ့ဲဘ၀အတွက်သင် အလေးအနက်ထားစဉ်းစားပါ မိတ်ဆွေ။ ယခုအချိန်ဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ဘ၀အတွက်အလွန်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ပါပဲ။
ငရဲကလွတ်အောင် ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်၊ဂိုဏ်းဂဏနဲ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေက မကယ်တင်မစွမ်း
ဆောင်ပေးနိုင်ပါ။ မိဘနှစ်ပါးက သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ဘုရားသား
သမီးများဖြစ်ကြပေမ့ဲ၊သားသမီးတွေက သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိရင်
အပြစ်သားတွေအတွက် အသေခံခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်
လက်ခံသူဟာ အပြစ်များဖြေလွတ်ခြင်းခံရမည်။ နောင်တမလွန်မှာ ငရဲ့နှင့်သေချာပေါက်လွတ်လျက်
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်မည်လို့သမ္မာကျမ်စားထဲမှာ ဘုရားသခင်ကတိပေးထားပါတယ်။မိတ်ဆွေ
ဟာသခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံမှသာငရဲမှလွတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့လည်း
ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဟာ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်၊ ငရဲ နှင့်သေချာပေါက်လွတ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သူအဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံဖို့ လက်မခံဖို့ ဆိုတာကိုပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ပါ။
မိတ်ဆွေဟာဤလောကမှ ထွက်ခွာသွားရမယ့်အချိန်ကိုမသိတဲ့အတွက် ယခုပင် မိမိကိုယ်ကိုမိမိစဉ်းစား
ဒါကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ ယခုအချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကိုမိမိသေချာစစ်ဆေးလျက် တိကျပြတ်သားစွာစဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပါ။
** သခင်ယေရူခရစ်တော်သည် ယခုဘ၀အတွက်သာမက နောင်တမလွန်ရေးအတွက်ပါ စိတ်အေးလိုသူတိုင်းအတွက် အာမခံချက်ပေးနေသည်။
** ငရဲနှင့်သေချာပေါက်လွတ်ပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်လိုသောသူတိုင်းသခင်ယေရူကို ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်၊ငရဲနှင့်သေချာပေါက်လွတ်
ရာသို့ငါ၀င်၍ သူနှင့်အတူစားသောက်မည်ဆိုတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေလဲ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်
နှလုံးတံခါးဖွင့်ပြီး၊ အကြွင်းမဲ့အုပ်စိုးခိုလှုံခွင့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အဲ့ဒီအခါမှာသခင်ယေရူခရစ်တော်ဟာမိတ်ဆွေ
ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာ ၀င်ရောက်ကျိန်း၀ပ်ပြီး အုပ်စိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်မိတ်ဆွေ၊ သင့်စိတ်နှလုံးထဲ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုလက်ခံချင်သလား။ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်
သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုသင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကျိန်း၀ပ်ဖို့ခေါ်ဖိတ်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကျိန်း၀ပ်ဖို့ခေါ်ဖိတ်လက်ခံရန်အသင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်
ကောင်းမြတ်စုံလင်တော်မူ၍ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်ရှင်သည်
သား/သမီးကိုအပြစ်ငရဲမှ ကယ်တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ သား/သမီးဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ
ပြုလုပ်မိခဲ့တဲ့ အပြစ်အားလုံးအတွက် ၀န်ချတောင်းပန်ပါ၏။ အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖြေလွှတ်တော်မူပါ။
ယခုအချိန်ကစပြီး သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရားသည် သား/သမီးရဲ့အပြစ်တွေအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်
ဖြင့် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခံပါပြီ။ ဒါကြောင့်သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရား သား/သမီးရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာ
ကျိန်း၀ပ်၍ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သာမက အရှင်သခင်အဖြစ်လည်း အုပ်စိုး၍ လမ်းပြသွန်သင်တော်မူပါမည့်
အကြောင်း သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရား၏ နာမကိုအမှီပြု၍ဆုတောင်းခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါ၏။ အာမင်။
ယခုလိုမိတ်ဆွေရဲ့ စိတ်နှလုံးထဲ သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရားကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံပြီးတဲ့ ယခုအချိန်က
စပြီးမိတ်ဆွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပါပြီ။ မိတ်ဆွေဟာ ထာ၀ရအသက်ဆိုတဲ့ ကယ်တင်ခြင်း
ဆုကျေးဇူးတော် ငရဲနှင့်သေချာပေါက်လွတ်ပြီးဆိုတဲ့ အာမခံချက်ကိုလည်း ယခုအချိန်နာရီကစ၍
လွတ်တာတင်မကသေးဘူး ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်ဖို့လည်း ယခုအခိျန်ကစ၍သေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အနာဂါတ်ကို ပိုင်ဆိုင်သူအဖိုးတန်လူသားတစ်ယောက်
ချစ်သောမတ်ဆွေ…..သင်သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တပါးပါးနှင့် ဆက်သွယ်ပြီးထိုအသင်းတော်မှ
အသင်းအုပ်ဆရာအားသင်သည် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါ။ ထိုအသင်း
အုပ်ဆရာထံမှ ဗတိ္တဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်း(နှစ်ခြင်းအင်္ဂလာခံယူခြင်း)အကြောင်းမေးမြန်းသင်ယူပါ။ သင်ယူပြီး
နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရန်သင့်စိတ်နှလုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်ပါက ထိုအသင်းအုပ်ဆရာနှင့်တိုင်ပင်ကာ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို
ခံယူပါ။နှစ်ခြင်းမင်္ဂခံခြင်းသည် လူရှေ့ဘုရားရှေ့တွင်သင်သည်သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံပြီး
ကိုအချိန်ပေး၍ မှန်မှန်ဖတ်ပါ။ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပါ။ ၀တ်ပြုအစည်းအေ၀းများလည်းတက်ရောက်ပါ။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလျက် ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နှင့် သင့်အသက် တာလမ်းကို လက်တွေ့လျှောက်လှမ်းပါ။
သင်၏အလုပ်များကိုဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်အပ်နှံပြီး ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားလျက် အလုပ်များကို
ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်အတိုင်း သင်ရရှိသော၀င်ငွေအားလုံးကို ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့
(တစ်ဆယ်ရလျင် တစ်ကျပ်၊တစ်ရာရလျှင် တစ်ဆယ်ကျပ်) ဖယ်ကာ ဘုရားသခင်၏ အမူတော်မြတ်တွင်ပါ၀င်ပါ။
ထိုအခါဘုရားသခင်သည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း သင်၏ခန္ဓာ၊စိတ်၊၀ိညာဉ်အပေါ် သင်၏ အလုပ်အကိုင်များအပေါ် သင်၏မိသားစု၀င်အားလုံးအပေါ် ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင် တံခါးဖွင့်ပြီး ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို အကုန်အစင်သွန်းလောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာကို မှန်မှန်ဖတ်ရူပြီး ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို
အမြဲဆင်ခြင်အောက်မေ့ပါ။ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်များအတိုင်းလက်တွေ့အသက်ရှင်ပါ။
Shwe Canaan TV: သင့်အတွက်…. ငရဲမှသတိပေးစကား